गाइजात्रा शैलीमा गाइतिहार : हे बरै..को प्यारोडी – MySansar
गाइजात्रा शैलीमा गाइतिहार : हे बरै..को प्यारोडी
Posted on October 20, 2017 October 20, 2017 by Salokya
व्यङ्ग्यकर्मीहरुलाई गाई शब्द जोडिएको जे आए पनि व्यङ्ग्य नै गर्नुपर्छ भन्ने लागेको रहेछ कि के हो, गाईजात्रामा मात्र हैन अब गाइतिहारमा समेत व्यङ्ग्य गर्न थालेका छन्। सिस्नुपानी नेपाल नामको संस्था र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मिलेर गाइतिहारको अघिल्लो दिन प्रज्ञा हलमा प्रज्ञा सिस्नुपानी देउसी भैलोको आयोजना गर्‍यो। देउसी भैलोमात्र हैन व्यङ्ग्य कविता, प्यारोडी र प्रहसनसमेत यसमा देखाइयो। पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका नेतादेखि लिएर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु, वर्तमान प्रधानसेनापतिसम्म भएभरका विशिष्टहरुलाई बोलाएर व्यङ्ग्यात्मक देउसी भैलो देखाइयो। त्यही कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको प्रकाश गन्धर्वले गाएको हे बरै..को प्यारोडी।
माथि भिडियो नखुले यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्
दसी धाराले नरोए आमा
देश बाँचे पठाम्ला तस्वीरै खिचेर ।
कस्तो छिमेकी पर्‍यो नि
विकास हुनै दिँदैन हजूर…।
हे बरै, हे बरै..
जनताले सोध्लान् नि खोई विकास भन्लान्
रणमा पर्‍यो भन्दिए।
बीपीले सोध्लान् नि खोई कांग्रेस भन्लान्
घेरामा परे भन्दिए।
मदनले सोध्लान् नि खै जबज भन्लान्
प्रचण्डलाई सोध भन्दिए।
शहीदले सोध्लान् नि खै माओवाद भन्लान्
टोपी झिक भन्दिए।
कमलले सोध्लान् नि, खै कोमल भन्लान्
ओलीले लगे भन्दिए।
करिश्माले सोध्लिन् नि खै बाबुराम भन्लिन्
माया मार भन्दिए।
तिलाठीको बजारैमा चार पैसाको ला छैन
जङ्गे पिलर वरवर सर्दा सरकारमा बस्नेलाई थाहा छैन
सिसै काटी नि गोलीले
गर्लान् त केही प्रचण्ड ओलीले…।
27 thoughts on “गाइजात्रा शैलीमा गाइतिहार : हे बरै..को प्यारोडी”
TheSavar Roman says:
Yo chai ramro chha
गित चाहिँ होके
सुमिन छेत्री says:
यो कुनै रमाइलो हैन। बुझ्ने लाई शिरिखन नबुझ्ने लाई खुर्पाको बिड हो। नेताहरुले बुझ्ने कुरा हो। यो भनेको यो कुरा गम्भीर रुपमा केपिले मात्र लिएको देखिन्छ। भिडियोमा
Song ? is very nice unfortunately not this time!!!
Milan Newar says:
Yesta haru lai jatinei gana banayera dosi dosi vanda ni krhi lagdeina kina ki neta vanauda har haru lai des parti alikati pani maya xena
Bijaya Nepali says:
Nice words singing
Sajjan Regmi says:
यो तिहार हो गाइजात्रा होइन . एस्तो बिकृति लाई बन्द गर्नु पर्छ
Mukh aagade vanda ne matlab chaina …. kasto bidambana cha
Chettry Hari says:
Sunar Sanjaya says:
Parkas dai ramro xa
यो सिस्नुपानि भन्ने सस्थालाई कुन चाड के हो भनेर पनि थाह छैन कि क्या हो? देउसी भैली लाई नि गाईजात्रा नै बनाए हुदा हुदा प्रज्ञा प्रतिस्थान पनि आयोजक रे जुन सस्थाले संस्कृति बचाउनु पर्ने त्यहि नै बाटो हगुवा जस्तो पो भयो त ?
Rastra Premi Tamang Kto says:
वास्तविक यथार्थ वरण गरिएको छ ।
Amina Ameena says:
Just wow love the singing and words
लाज पचाएर अझै हाँस्न सकेरै नेता बनेका रहेछन् अरु भए त डाडु मा पानी तताएर मर्थे होलान् ।
Laj pacheka neta haru
Dhan Govinda Maharjan says:
Puja Gire says:
manxhe haru lai aja vholi jpt gana lekhna ra gauna paye kk nai paye vhanthaxan ki k ho…. laja ko marnu…… k sunera baseka holan….
Babu Ram Magar says:
Thank u gan…. vai
Super xa bhaiko geet
नेताहरुलाई च्वास्स घोचे पो ! गैंडाको छाला जस्ता भाको छ तिनको मन । झन् हाँस्दै बस्या छ्न … मुखाँ हानुम जस्तो
Birendra Aasish says:
Good bangatmak git gaunuvo vai thank u
Ruk Buda Magar says: